ဦးဒေးဗစ် အေဘယ် (ဝါ) တပ်မတော်သား ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမား
ဗိုလ်မှူးချုပ်(ငြိမ်း) ဒေးဗစ် အေဘယ်မှာ စစ်တပ်အုပ်စိုးစဉ်ကာလက စီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာန သုံးခုကို တာဝန်ယူခဲ့ရသူ ဖြစ်သော်လည်း ၎င်း၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အဆိုပြုချက် အများစုမှာ မျက်ကွယ်ပြုခံခဲ့ရသည်။
အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ပြန်လည် စဉ်းစားဖွယ်ရှိ
သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကို ဧည့်ခံပွဲတစ်ခုတွင် တွေ့ရစဉ်။ ဓာတ်ပုံ- အေအက်ဖ်ပီ/ရဲအောင်သူ ရန်ကုန် တရုတ်နိုင်ငံက ကျောထောက်နောက်ခံ ပြုထားသော အငြင်းပွားဖွယ် မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြန်လည်စဉ်းစားရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အစိုးရသစ်က စဉ်းစားနေသည်ဟု အေအက်ဖ်ပီသတင်းဌာနက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ စီးပွားရေးအကြံပေးတစ်ဦးကို ကိုးကားပြီး မတ် ၉ ရက်နေ့က ရေးသားထားသည်။.
သစ္စာရှိပြီး စည်းကမ်းလိုက်နာကာ အများလေးစားမည့်သူများကို ဒုသမ္မတလောင်းများအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့သည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား
အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် ဦးဟန်နရီဗန်ထီးယူနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ဦးထင်ကျော်တို့အား ဒုသမ္မတလောင်းများအဖြစ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က မတ် ၁၀ ရက်နေ့တွင် တင်သွင်းခဲ့သည်
ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ရှိနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အလုပ်များ ဖန်တီးပေးခြင်းသည် အဓိကကျနေသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမိုင်းဝင်နေ့အဖြစ် အမှတ်ရနေကြမည် ဖြစ်သည်။ မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသော လူဦးေရေ သန်း ၃၀ ထဲမှ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း ဆန္ဒမဲ ပေးခဲ့ကြသည်။ ရွေးကောက်ပွဲတွင်.
Serge Pun ရေးသားသည်။